CANAB "GIFT ZAPOROZHYE": SHARAXAADDA KALA DUWANAANTA, SAWIRADA, CUDURADA IYO DARYEELKA - BEERTA
Hardy iyo caleemo leh "Gift Zaporizhia"
"Gift Zaporizhia" - Tani waa mid cusub, laakiin horey loo ogaan jiray kala duwanaanshaha viticulture.
Waxay caan ku tahay miro ballaaran oo qurux badan, dhadhan cajiib ah, dulqaad iyo dhalidda sare.
Iyada oo dhammaan shuruudaha beerashada, wuxuu awoodaa inuu la tartamo noocyo badan oo canabka ah caan ah.
"Gift Zaporizhia" (oo la mid ah FVC-3-3) waa qaab miis ah oo canab cad ah oo leh xilliyo goos goos ah oo caadi ah. Kala duwanaanshuhu wuxuu u kobcayaa isticmaalka cusub waana mid aad u caan ah oo ka mid ah kuwa loo yaqaan "winegrowers".
Atam, Ilya iyo Tukay waxay sidoo kale ka mid yihiin noocyada cad cad.
Waxaa loo yaqaanaa nooc suuq ah. Waa beeraley badan oo doorbida inay iibiyaan. Kooxo waaweyn oo qurux badan oo "Gift Zaporozhye" waxay leeyihiin bandhig fiican oo ay ku jiraan baahida wanaagsan ee dhex mara macaamiisha.
Annie, Vodogray iyo Marcelo waxay leeyihiin calaamado la mid ah suuqa.
Fasalka qeexitaanka "Gift of Zaporozhye"
Canab "deeqda Zaporozhye" sharaxaad. Buundooyinka canabka heystaan ​​awooda weyn ee koritaanka. Ka dib markii la beero, baadiyaha si dhakhso ah u koraa oo bilaabmaa inay midho u dhasho sanadka soo socda. Vine ayaa daboolaya caleemo cagaaran oo cagaar ah oo ah seddex lakab iyo qaab liidata.
Kooxaha bannaanka u yaab leh leh cabbirka cajiib ah iyo miisaankiisu yahay 600 g ilaa 2 kg. Qaabkoodu waa qashin ama cylindrical leh nidaam dabacsan ama cufan ee miro. Canabku wuxuu u bislaaday wax yar ama mid aan lahayn digir, oo leh miraha waaweyn sida haddii la soo qaado.
Anthony The Great, Valery Voevoda iyo Helios ayaa sidoo kale leh kooxo waaweyn.
Miisaanka ugu hooseeya ee midhaha "Gift Zaporozhye" waa 10 g, iyo ugu badnaan - 18 g.
In dhererka, midhihii kasta waxay heli kartaa 32 mm, iyo width - 28 mm. Midabka canabku waa cagaar iftiin ah oo qoyan oo qiyaastii caddaan ah qorraxda leh ubax yar yar.
Qaswada tufaaxa iyo suufka ah ee berry waxay leedahay dhadhan isku dhafan oo wanaagsan oo leh qoraalada tufaaxa fudud. Sonkorta ku jirta miraha waxay ka jirtaa 16 ilaa 18%, qadarka acid waa 6 ilaa 8 g / l. Inta lagu jiro dhadhanka, khubarada ayaa ku qiimeeyay dhadhanka "Gift of Zaporozhye" berry at 8.4 dhibcood. Diirka diirka ayaa ah mid cufan, cufan, oo aan qallajin karin cimilada.
Ubaxyada kala duwan ayaa ah haweeyn haween ah. Canabkuna si fiican ayey u samaysteen xaalad kasta. Waa ku filan in ay leeyihiin dhowr nooc oo canab ah oo leh ubax bisexual ah meel u dhaw dooxadooda isla waqtigaas.
Ubaxyada dheddiguhu waa noocyo sida King, Ruta iyo Red Delight.
"Gift Zaporizhia" Waxa la naqshadeeyey cirifka caanka ah ee caanka ah iyo beerta hiwaayadda E. A. Klyuchikov oo ka soo jeeda Zaporozhye. Kala duwanaanshuhu wuxuu ahaa natiijada isgoysyada kala duwan ee saddexda nooc: "Kesha-1" (FV-6-6), "Tsytsa Resistance" (V-70-90) iyo "Ester" (R-65).
Kala duwanaansho ayaa la abuuray iyadoo la adeegsanayo Foomka FV-6-6x (V-70-90 + R-65). Natiijada shaqada waxay ahayd mid aad u fiican oo ku salaysan aragtiyo badan oo kala duwan oo adag oo adkaysi u leh.
Waxaa lagu beeray ku dhawaad ​​dhammaan gobollada Ruushka, halkaas oo laga helayo viticulture. Meelaha leh qaboobaha qaboobaha, duurka ee noocyo kala duwan, iyo sidoo kale Vostorg Cherny, Pereyaslavskaya Rada iyo noocyada Richelieu, waxay u baahan tahay hoyga jiilaalka.
Kala duwanaantu way kala duwan tahay heerar sare oo deggan, kaas oo uu siinayo sanadka labaad. Tilmaamihii badnaa wuxuu gaadhay 70%. Wax-soo-saarka wanaagsan ayaa sidoo kale lagu muujiyay xasuusta Dombkowska, Lidia, iyo Podarok Magaracha.
Isu-dheelitirnaanta noocyo kala-soocid ah waxay u dhaxaysaa 1.6 illaa labo xabbo oo isugeyn ah. Beergooyska canabka ah wuxuu kudhaca 135 maalmood ama in yar ka dheer.
Kala duwan ayaa leh muuqaal xiiso leh - miro miraha marka hore waxay helayaan cabbirka ugu sarreeya, kadibna waxay bilaabaan inay dillaacaan.
Gobolka Volgograd, goosashada ee Gift of Zaporozhye waxaa la goostay dhammaadkii Agoosto ama horraantii Sebtembar. Berry caanuhu wuxuu ku deldeli karaa baadiyaha muddo aad u dheer ilaa maalmaha ugu dambeeya ee bisha Oktoobar. Markaasaa beergooyska si fiican loo dhawray Maqsin ilaa Nofeembar iyo xitaa fasaxyada Cusub.
"Gift Zaporizhia" waxay u nugul yahiin inay kor u dhaafaan, sidaa darteed, waxay u baahan yihiin inay kudheeraan karaan. Arkady, Galben Nou iyo Super Early Early Seed waxay leeyihiin calaamad isku mid ah.
Cabbirta hal kayn ah waa inay ahaato 40 ilaa 45 indhood. Qeybtan waa mid aad u muhiim ah oo ku haboon manjooyin. Iyadoo gaaban gaaban ee geed canab ah, 3 ilaa 4 indhaha ayaa ka tagay, oo leh hal dheer, laga bilaabo 6 ilaa 8. Waxay u baahan tahay in laga saaro caleemaha aan qallajin lahayn.
Kala duwanaantu kama cabsanayso heerkulka hooseeya. oo awood u leh inuu u adkaysto heerkulka ilaa -24 ° C. Si kastaba ha noqotee, waxaa lagula talinayaa inay sii korodho qaabka daboolka ah ee rinjiga jiilaalka. Xilliga dayrta, duurka ayaa la gooyaa, canabkiina waxaa laga saaraa trellis ama canopies oo la dhigo dhulka, horey u dhigay kuraasta alwaax ama boards. Marka xigta, grapevine waxaa lagu daboolaa alaabta daboolka ah, iyo dusha sare waxaa lagu daboolay geedo geed leh.
Cadaadiska barafka wanaagsan waxaa sidoo kale lagu muujiyey Quruxda Woqooyiga, Arched iyo Super Extra.
Canabtu waxay u baahan tahay in si taxadar leh looga taxadaro gaadiidka. Berry waxaa loo daboolaa shanlo iyo si fudud oo ay u jajabaan miisaanka kooxaha xayawaanka deriska ah. Si looga hortago tan, waxaa looga baahan yahay in la geliyo rucub canab ah oo lakabka ah.
Kala duwanaanshuhu wuxuu jecel yahay in uu ku koro meelo iftiin leh. Halabuurka dalka ma aha mid aad u baahan, laakiin dhalidda ugu fiican waa on a iftiin, bacrin ah iyo dhexdhexaad ah carrada qoyan. Canabku uma dulqaadan karo qoyaan joogta ah xididada iyo ku dhowaad dhulka.
Muuqaal farabadan oo kala duwan oo kala duwan - guntooda gooyn si fudud oo degdeg ah.
Kala duwanaanta canabka "Gift Zaporozhye" waxay ku kala duwan yihiin caabbinta sii kordheysa ee cudurada fungal. Gaar ahaan isaga kama baqayo cudurka sida caan ah sida canab ah sida caarad.
Si aad u ilaaliso oidiyoon ee beerta canabka ah, daaweynta prophylactic ee duurka u leh xal of ferrous ama copper sulfate la fuliyaa. Daadi dhirta waa in ay ahaataa guga hore kadib markii ay heleen.
Si aad u ilaaliso canab ka soo cayayaanka, dhirta waxaa lagu buufin karaa daawooyinka dhowr jeer: guga ka dib furista duurka, inta lagu jiro bararka maqaarka, marka 2-3 caleemo muuqan, ka hor ubax iyo daqiiqad marka berry ay noqdaan "leh digir". Inta badan waxtarka:
Ka soo horjeeda warqadda - "Fury", "Decis", "Karate", "Talstar", "Lepidotsid", "Aktelli", "Kinmiks", "Inta-Vir".
Ka hortagga arachnoid iyo canabkuna wuxuu ka samaysan yahay koolo-koole, Nitrafen, Tiovit Jet, BI-58, Aktity, Fukako, Konfidor, Detsis, Karate, Inta-Vir.
"Gift Zaporizhia" marar dhaleeceyn soo noqnoqday. Cayayaanka ma awoodaan inay qaniinaan maqaarka cufan ee berry. Laakiin maaha inay ku raaxaystaan ​​saxaraha macaan ee canab, shimbiraha ay ku dhufteen.
Inta lagu jiro Bisaylkiisa canab, ninkii beerta ka shaqaynayay ayaa wajahay caqabad culus - si loo ilaaliyo dalagga shimbiraha. Haddii aan dhaqso wax looga qaban, cayayaanka baaluqa ayaa burburin kara qayb muhiim ah oo dalagga ah.
Vineyard waxaa si fiican loo ilaaliyaa shimbiraha kala duwan, walxaha dhalaalaya, naqshadaynta. Laakiin tan waxaa loo tixgeliyaa qiyaas ku meel gaar ah, sida shimbiraha si dhakhso ah loo isticmaalo iyaga. Goolasha loo yaqaan "winegrowers" waxaa lagula talinayaa in ay isticmaalaan shabakad difaac ah oo kor u kaca duurka. Qalabka noocan ah waxaa laga iibsan karaa dukaamo khaas ah.
Sida ay bannaanka u badan, noocyada kala duwan ee raaxo kala duwan yihiin noocyo kale oo isku kalsoon, dhadhan, iyo bandhigid. Iyada oo daryeel ku haboon, wax-soosaarkooda xasilloon iyo sareeya ee kala duwanaanshahan cajiibka ah ayaa laga heli karaa xitaa by gabbalaha bilawga ah.
Waa hagaagsan yihiin beeralayda novice ah iyo noocyada noocan oo aan qabyo ahayn sida Aleshenkin dar, Giovanni iyo Denisovsky.